Iikhosi zezeSiko-iZiko leeLwimi eziBini
Ikhaya Iinkqubo Iinkqubo ezizodwaIikhosi zesiko
Izifundo zesiko zizifundo eziyilelwe wena kunye neemfuno zakho zolwimi. Mhlawumbi unomboniso omkhulu oza kuza okanye usokola ukuqonda izaci zaseMelika. Gxila kwizakhono ezithile zolwimi-Ukuthetha, ukubhala, isigama, igrama kunye nokunye! Ukubonisana neqela lethu leKharityhulam kuyafumaneka ukunceda ukujonga amandla kunye neendawo onokuphucula kuzo.
Iiklasi zabucala zizifundo ezizodwa ezinomfundi omnye kunye notitshala omnye.
Ukufundiswa okwenziwa simi yabucala kwenziwa ngokwezifiso ukulungiselela iimfuno zabafundi aba-2.
Izifundo ezincinci zeqela elincinciweyo zilungiselelwe iimfuno zabafundi aba-3 - 5.
Inkqubo yokufunda eyenzelwe wena kubandakanya ukuvavanywa kwangaphambili kwekhosi, udliwanondlebe lokucacisa, iingcebiso zekharityhulamu eneenkcukacha, kunye novavanyo lomntu ngamnye
Izifundo ezenziwe ngokwezifiso ezikunika ukuziqhelanisa okunzulu ngezihloko zolwimi ezibaluleke kakhulu kuwe, umzekelo: unxibelelwano ngeshishini, ukuqonda kokumamela, ukulungiswa kwe-TOELL, ukubhala, okanye isigama esiqhelekileyo sesiNgesi, igrama kunye nokubiza amagama.
Ngabafundisi abanamava, abazinikeleyo nabanobuhlobo
Efanelekileyo kuwo onke amaNqanaba
Ubuncinci beekhosi zeYure
Indawo okhetha kuyo
Bhalisa Ikhosi yesiNtu namhlanje!
Nokuba yeyiphi na imfuno- i-BEI inokunceda! Izifundo zenzelwe umntu ukuba zilungele izakhono zolwimi zomfundi.